XOG: Diidmada Cabdi Xaashi ee heshiiska doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
XOG: Diidmada Cabdi Xaashi ee heshiiska doorashadda
Waxaa socda dadaallo lagu qancinayo Cabdi Xaashi oo qaadaacay heshiiska doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa Muqdisho ka socda dadaallo lagu qancinayo Cabdi Xaashi, gudoomiyaha Aqalka Sare oo diiday inuu ka qeybgalo xafladda saxiixa heshiiska doorashadda.
Waxaa dadaalka hormuud u ah Xasan Sheekh, Saciid Deni iyo qaar kamid ah Musharixiinta oo isku dayaya inay Cabdi Xaashi geeyaan Afisyooni, oo la filayo inay ka billaabato goordhaw munaasabadda saxiixa heshiiska.
Cabdi Xaashi waxaa loolan adag kala dhaxeeyay Mahdi Guuleed, oo dhinac Farmaajo ah kaasoo gacanta loo geliyay hanaanka doorashadda Xildhibaanada Somaliland, iyadoo arintaas keentay khilaaf xoog leh oo soo kala dhexgalay siyaasiyiinta gobollada Waqooyi oo labo garan u kala jabay.
Rooble ayaa sameeyay dadaallo wanaagsan, oo khilaafka doorashadda lagu xalinayo, laakiin waxaa muuqata inaysan wada qanacsanayn dhamaan saamileyda siyaasadda oo qaarkooda wali dhaliilsan sida wax loo qeybiyay.
Cabdi Xaashi waa siyaasiga ugu miisaanka culus ee xubnaha Somaliland ku matelaya dowladda, isagoo mudo dheer kasoo mid ahaa dowladihii dalka soo maray, oo xilal kala duwan kasoo qabtay.